Bilooyin badan oo sugitaan ah kadib, ugu dambeyntii shirkadda saldhiggeedu yahay Cupertino ayaa si rasmi ah u shaaciyay taariikhda furaha ah ee lagu soo bandhigi doono iPhone 7 cusub iyo iPhone 7 Plus, taas oo sida ku xusan dhammaan wararka xanta aan kaligood imaan doonin, laakiin waxaan sidoo kale awoodi doonaa inaan aragno jiilka labaad ee Apple Watch. Dhab ahaantii jiilkii ugu horeeyay ayaa arkaya sida tirada unugyada la heli karo aad ayey hoos ugu dhacday labadaba dukaamada jirka iyo Apple Store intarneedka.
Haddii aad rabto inaad la socoto dhacdada ka socota Actualidad iPhone toos, waad ku mahadsan tahay caymiska aan ku siin doonno, ugu horreyntii waa inaad ogaataa waqtiga uu bilaabmayo miiskan, maaddaama ay ku kala duwan tahay hadba waddanka aan joogno. Inbadan waxay ahaayeen tarjumaadaha lagu sameeyay sawirka loo adeegsaday ku dhawaaqida muxaadaradaan, Sawir aad si toos ah uga soo dejisan karto si aad ugu isticmaasho iPhone-kaaga, iPad-ka, iPod taabashada ama Mac-ga.
Kadib sameynta ku dhawaaqida dhacdadan, Apple waxay kicisay koontadaada Twitter, Koontada uu sameeyay bishii Sebtember 2011 illaa iyo taariikhdaasna wax daabac ah ma uusan helin. Waxyaabaha ku saabsan iPhone 7 iyo 7 Plus, macluumaadkii ugu dambeeyay ee la daabacay, markan iyada oo loo marayo xallinta la aqoonsan yahay, sida falanqeeyaha KGI Ming-Chi Kuo, Waxay nagu wargelinayaan inay biyuhu diidi doonaan, waxay soo deyn doontaa midabka madow ee Piano, isagoo ka tagaya buluugga 'Deep' war aan waligiis la xaqiijin. Qaar ka mid ah ereyo cusub ayaa na tusaya sida ay u ekaan doonto iPhone 7 oo leh midab madow Piano.
In kasta oo hadda nooca ay Apple saxeexayso aanu la jaanqaadi karin JAILBREAK, haddana Actualidad iPhone waxaan sii wadeynaa inaan ka warbixinno isbeddelada cusub ama cusbooneysiinta ku soo socota Cydia. Toddobaadkan waan ka hadalnay EventOnAppClose, taas oo noo oggolaaneysa inaan la falgalno ficil markaan xirno codsi gaar ah; BannerBlackList waxay naga horjoogsaneysaa inaan helno ogeysiisyada barnaamijyo gaar ah ama ciyaaro gaar ah; GIFLock wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku darno GIF faylka gidaarka iPhone-ga iyo CustomNC, oo noo oggolaaneysa in aan u habeynno interface Center interface.
Soo gal, isbadal ku yimaada shakhsiyadeynta shaashadda furitaanka ee iOS